यी नै हुन् ! बिवाहको नाटक गरी ५ दिनसम्म युवतीको इ’ज्जत र २ लाख लुटेर भा’ग्ने प्र’काउ” (पुरा पढ्नुहोस् ) – Life Nepali
यी नै हुन् ! बिवाहको नाटक गरी ५ दिनसम्म युवतीको इ’ज्जत र २ लाख लुटेर भा’ग्ने प्र’काउ” (पुरा पढ्नुहोस् )
काठमाडौँमै घर अनि जग्गा भएकी एक २४ बर्षिय युवती एक युवकको प्रेम-जालमा परिन् । करिब ३ महिनासम्मको प्रेमपछि उनिहरू बिवाह गर्ने निष्कर्षमा पुगे र बिवाह पनि गरे । त्यसपछि केटाको काडमाडाैँमा घर नभएका कारण थानकोट चेकपोष्ट स्थित डेरा खोजे । केटासँग पैसा नभएपछि कोठामा फर्निसिङ गर्ने लगायतका खर्च युवतीले नै गरिन । बिवाह गरेको केहि दिनमा नै गत साउन २२ गते बिहान युवती निद्राबाट ब्युझिदाँ भर्खर बिवाह गरेका श्रीमान साथमा थिएनन् । ***थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,
दराजमा राखेको २ लाख नगद र २ तोला सुन पनि नभएपछि उनि छाँगाबाट खसेझै भइन् । युवक पैसा र गहना लिएर फ’रार भइसकेका थिए । त्यसपछि युवतीले प्रहरीमा उ-जुरी गरिन् । यस घटनाका युवक हुन् धादिङ घर भएका राजन विश्वकर्मा अर्थात राज सेन्चुरी ! जसलाई प्रेम र विवाहको ना-टक गरेर युवती ब-ला-त्कार गरेको आ-रोपमा थानकोट प्रहरीले पक्रेको छ ।
राजन विश्वकर्मा अर्थात राज सेन्चुरी
काठमाडौं घर भएकी २४ वर्षीया युवतीलाई नाम, थर ढाँटेर प्रेम विवाह गरेको, तीन महिना प्रेम सम्बन्ध राखेर नक्कली विवाह गरेको र थानकोट चेकपोष्ट स्थित डेरामा युवतीलाई ६ दिन ब-ला-त्कार गरेर फ-रार भएको उनि माथि आ-रोप छ । महानगरीय प्रहरी वृत थानकोटको डिएसपी घनश्याम श्रेष्ठले पी-डितले दिएको जाहेरीको आधारमा हामीले उनलाई पक्रेर ब-ला-त्कार र ठ-गी मु-द्दा चलाएका बताए । युवतीलाई सेन्चुरीले ठ-ग्ने र ब-ला-त्कार गर्ने नियतले नै माया-जालमा पारेको पाइएको छ । ***थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,
Previous को’रोना लकडा’उनका का’रण नेपालमा जग्गा जमीनको भा’उ ह्वा’त्तै घ’ट्यो”
Next यी नै हुन् ! बिवाहको नाटक गरी ५ दिनसम्म युवतीको धन र मन लु’टेर भाग्ने”